Mas'uuliyiintii Xisbiga Waddani oo Xabsiga Mandheera lagasii daayay.
Wednesday November 27, 2019 - 09:56:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib dhax dhaxaadin ay odayaal dhaqameedyo ay ka dhax sameeyeen maamulka isku magacaabay Somaliland iyo Xisbiyada Mucaaradka ayaa ugu dambeyntii lasii daayay xubno ku xirnaa xabsiga degmada Mandheera.
Xoghayihii guud ee xisbiga Waddani Khadar Xuseen iyo Afhayeenkii xisbiga Waddani Barkhad Jamac ayaa lasii daayay iyadoo aan wax maxkamad ah la saarin.
Cabdi Raxmaan Cirro oo ah guddoomiyaha Xisbiga Waddani ayaa soo dhoweeyay sii daynta mas'uuliyiinta Xisbiga balse faah faahin dheeri ah kama bixin sababta loosii daaye.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Muuse Biixi iyo Cirro ay isku afgarteen in khilaafka laxadeeyo islamarkaana aan ladhigin dibad baxyo ka dhanka maamulka 'Somaliland'.
Odayaal dhaqameedyadii wadahadalka dhax dhigay labada dhinac ayaa Xisbiga Waddani uballan qaaday in aan la beegsan doonin shaqaalaha Xisbiga inta laga gaarayo doorashooyinka soo socda.
Isbuucii lasoo dhaafay xiisada siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa laga cabsi qabay in ay isku bedelaan dagaal ay gorodda islagalaan dhinacyadii horay udhisay maamulka isku magacaabay 'Somaliland'.